AutoSEO vs FullSEO: Ndeipi Semalt SEO Service yaunofanira kusarudza?
Yekutsvagisa Injini Yekutsvaga inhau inonyengera. Nepo dzinenge bhizinesi rese parizvino rakavimba ne SEO kuisa sangano ravo pamberi pemeso akakodzera, ichokwadiwo kuti vashoma veanjineri ndivo vanonyatsoziva izvo Google nemamwe mainjini ekutsvaga. Kuchengeta nhandare yemunda wekutamba, makiyi ekutsvaga injini optimization ndeye chakavanzika chakachengetedzwa.
Izvi zvinoreva kuti SEO zvishandiso uye zvakanakisa maitiro hazvina kubva pane yakasarudzika mirayiridzo yakapihwa neGoogle, asi nekuyedza kuti chii chinoshanda uye chii chisingashande. Basa rakawanda raunoita mukutsvagisa injini, zvakajeka zvinodiwa, zvinodiwa uye zvaunofarira zvemahinjini makuru ekutsvaga anova.
PaSemalt takapedza makore gumi tichikudza hunyanzvi hwedu hweSEO. Isu tamboongorora zvakapfuura mamirioni 1.5 mawebhusaiti uye tinozvirumbidza pamusoro pevazhinji mazana matanhatu ezviuru vanyoreri. Isu tine nzwisiso yakadzama yezvazvinotora kuti sangano renyu risangori papeji reGoogle, asi rinosvika kumusoro chaiko kwenzvimbo. Kwemakore gumi apfuura, takashanda nesimba kuti uve mupi weSEO wezvekusarudzo kune akawanda masangano anotungamira.
Asi ndechipi chedu SEO masevhisi iwe chaunofanira kusarudza? Nhasi tichave tichitarisa edu AutoSEO uye FullSEO mapakeji ; misiyano, kufanana, uye maitiro ekuona kuti ndeipi sarudzo yakakunakira.
Chii chinonzi AutoSEO uye FullSEO?
Chekutanga chinhu chekutanga: chii chaizvo chiri AutoSEO uye FullSEO?
Pane padanho rakakura, AutoSEO uye FullSEO zvinhu zviviri zvinogadzirwa kuti zviite chinhu chimwe chete: shongedza webhusaiti yako kuvandudza yako yekutsvaga injini chinzvimbo. Ivo zvigadzirwa izvo isu paSemalt takagadzira-mumba, uye imwe neimwe yakashandiswa nemabhizinesi munenge nyika dzese pasi.
Asi kubva kune izvi zvakakosha zvakafanana, zvigadzirwa zvinotanga kutsauka.
AutoSEO chishandiso otomatiki chishandiso chinomiririra yedu yekupinda-chikamu paki. AutoSEO yakagadzirirwa chero munhu anotora nhanho dzekutanga kupinda munyika yeSEO uye inoisa mushandisi mukutonga.
FullSEO yedu yakazara SEO pakeji. Yakagadzirirwa chero munhu akagadzirira kutora injini yekutsvagisa zvakanyanya uye ari kutsvaga iyo yakanyanya kunaka, inokurumidza uye yakareba-mhedzisiro mhedzisiro. Iwe unogona kusiya zvese zvinorema kusimudza kwatiri, sevashandisi veFSSEO vanowana mukana kune timu yedu yeSEO nyanzvi.
Ngatimboongororai nezve mhinduro idzi, uye titarise chaizvo kuti imwe neimwe inoshanda sei.
Chinongedzo ku AutoSEO
Iwe unoda kuwedzera kuoneka kwevatengesi uye kutengesa? Iwe uri kutora matanho ako ekutanga kupinda munyika yeinjini yekutsvaga? Iwe unoda kuwona here imwe mhedzisiro usati wazvipira kune yakakura dura?
AutoSEO inogona kunge iri chigadzirwa chako.
Semalt's AutoSEO package yakagadzirirwa mabhizinesi anoda kuwedzera saiti traffic, asi asingade kuisa mari mukusimudzira saiti panguva yekutanga nhanho, zvishoma kusvikira vaona mhedzisiro chaiyo. AutoSEO inoisa iwe mumutyairi wechigaro, ichikubvumira iwe kuvhura SEO maratidziro emari shoma seUS $ 0.99.
AutoSEO inoshanda sei?
Ngatitarisei kuparara kweicho chaiyo AutoSEO inoshanda.
Kunyoresa: Iwe unotanga maitiro nokuzadza fomu iri nyore reSEVSEO kunyoresa.
Kuongororwa kwewebsite : Yako webhusaiti inoongororwa, uye AutoSEO ichaudza maitiro ako zvakanaka saiti yako zvinopesana newekuvaka webhusaiti uye SEO indasitiri zviyero.
Kugadziriswa kwemaitiro: Kushanda nemumwe wevakuru vedu SEO nyanzvi, wako Semalt maneja achamhanya zvakanyanya kuongororwa kwewebsite yako, uye gadzira rondedzero yezvikanganiso uye zvisina basa zvinoda kugadziriswa.
Kuita ratidziro yemushumo: Kana tangobvumidzwa faira yekufambisa protocol (FTP) kana CMS admin panji yekufambiswa, mainjiniya edu achaita ekurudziro dzakaitwa kuitira kuvimbisa mushandirapamwe we AutoSEO mushandirapamwe.
Keyword research: Iyo SEO injinari inogadzira rondedzero yemashoko akakosha kuti aiswe mu webhusaiti yako, akasarudzwa kuti awedzere kutengesa uye traffic.
Chivakwa chechibatanidza : AutoSEO inotanga kuisa zvisikwa zvekusika kune uye kubva kune yakavimbika masosi munzvimbo yako yese, kuwedzera yayo yekutsvaga injini kuoneka. Semalt ine dhatabhesi inodarika zviuru makumi mashanu zvepamusoro-mhando nzvimbo masosi, uye zvinongedzo zvinosarudzwa zvichienderana nezera rezita uye TrustRank. Chivakwa chechigadzirwa chinoitwa padanho rekuyerwa kusvika kune inotevera chiyero: 10% zita rezita zvinongedzo, 40% anchor zvidhori, 50% zvisinga-anchor zvinongedzo.
Campaign tracking: Iyo budiriro ye kampeni yako inoteverwa kuburikidza neyakagadzirirwa zuva resejista yeakasimudzirwa keyword rondedzero.
Kuenderera mberi kwekutarisa: AutoSEO inoenderera nekutarisa kufambira mberi kwemushandirapamwe, ichipa mishumo kuburikidza neemail kana iyo yemukati system yekuzivisa.
AutoSEO yakagadzirirwa avo vanoda kudzidza zvishoma nezve SEO vasati vaita mainvestment. Izvo ndezveya testers uye vateki vanofarira kubuda pachena uye kutonga. Zviri kune chero ani zvake anoda kutanga yavo SEO rwendo nenzira inodhura uye inodzidzisa.
Iwe unoda kuve wakanyanya kunaka here? Iwe unonzwisisa kukosha kwekutsvagisa injini yekutsvagisa, uye unoda mhinduro yakazara uye inoshanda? Iwe unoda kuisa mari muchikwata chakatsveneswa uyo anogona kuendesa zvakanakisa mhedzisiro?
FullSEO ndiyo yakakodzera phuku.
FullSEO ndiyo iyo Roll-Royce yeSemalt's SEO yezvipiriso. Iyo mhinduro yakabatanidzwa neine yakazara SEO zano kune yayo musimboti. Iwe unowana kuongororwa kwakadzika kubva kune indasitiri-inotungamira nyanzvi, kwete yako wega saiti, asi yemakwikwi 'masaiti uye iyo niche inoshanda mune yako kambani. Iyo inoshandisa zvakakwana, yakatsanangurwa SEO maitiro, uye inopa yakazara saiti kuvandudzwa nechikwata cheve Semalt nyanzvi avo vanozove mukukurukurirana. Iyi paki inovimbisa akakosha webhusaiti kukura kwehuwandu uye yakakwirira shanduko matanho.
FullSEO inoshanda sei?
Iyo FullSEO package inogona kupunzikira pasi muzvikamu zvina zvikuru: kuongororwa, mukati mekugadziriswa, kubatanidza kuvaka uye kutsigira.
Kuongorora kwakadzika kuchaitiswa nechikwata che Semalt SEO nyanzvi uye yako wega Semalt maneja. Ongororo iyi ichafukidza:
Kuziva akakosha akakodzera mazwi ayo ayo anokwezva makuru uye anotariswa vateereri zvakanyanya.
Kuongorora chimiro chewebhusayithi uye keyword kugovera kuti uone maitiro ayo anopindirana neSEO maitiro akanakisisa uye kusarudza iwo ewebhu mapeji ayo anozove anotarisisa webhusaiti kusimudzirwa.
Kuunganidza ruzivo nezve mawebhusayithi evanokwikwidza vako uye niche kuitira kuti uwane hukuru hwepamusoro hweGoogle chinzvimbo.
Kana ongororo ichinge yapera, timu yeSEO nyanzvi, ichishanda inandem neSemalt webhu musiki, ichaita ongororo yemukati yewebhusaiti yako kuti isangane neyekutsvagisa injini yekutsvaga maitiro uye kubvisa chero zvikanganiso kana zvipingamupinyi zvingave zvichikubata kumashure. Iyo yekuvandudza yemukati chikamu ichavhara:
Iko kusikwa kwe meta tags uye ma tag tag akavakirwa pane yekutanga keyword ongororo.
Kuvandudza uye kuvandudza webhusaiti HTML kodhi uye kuisa zvakakodzera hunhu.
Kugadzirisa marobhoti.txt uye .htaccess mafaira kuitira kuti webhusaiti iratidze mumainjini ekutsvaga sezvainofanirwa. Kugadzira iyo sitemap faira yekupedzisa indexing yemapeji ewebhusaiti.
Kuisa mabhatani ezvemagariro pawebhu webhusaiti ekuvandudza kushamwaridzana.
Kunyange ichigona kutariswa sechikamu chegadziriro yemukati yekushandisa, dhizaini yekubatanidza yakakosha kuti ive danho pachayo. Pakati pekuvakwa kwekubatanidza, timu yedu yeSEO nyanzvi icha:
Ongorora yako webhusaiti 'yekubatanidza juisi' (iyo injini yekutsvaga kukosha kana kuenzana yakapfuura kubva kune imwe peji kuenda kune imwe).
Ivhara zvisina kukodzera kana zvisingabvumirwe zvekunze zvinongedzo kuchengetedza peji rewebhu.
Ziva nzvimbo dzakanakisa dzekuisa idzva, zvinobudirira zvinongedzo.
Gadzira iyo niche inoenderana nechero jisi inodikanwa kuti usvike nzvimbo yepamusoro paGoogle. Izvi zvinoitwa nekubatanidza mhando dzemhando yekuisa mune yakasarudzika ine chekuita nenyaya yako kuti uwedzere kushanda kwekusimudzira kwako.
Regedza Kukanganisa 404 mameseji uye bvisa zvakaputswa zvinongedzo.
Iyo yekupedzisira asi munzira dzakawanda, iyo yakakosha chidimbu chePuzzleSEO iyi rutsigiro runopfuurira rwunopihwa newe wega Semalt maneja. Maneja wako ano tarisa kufambira mberi kweyako YeseSEO mushandirapamwe zuva nezuva, kuita gadziriso uye kukuchengeta iwe wakatumira imwe nhanho nzira. Maneja wako acha:
Ipa zuva nezuva kana zvekukumbira mishumo yekufambira mberi kwemushandirapamwe.
Ipa iwe kuwana kune yekubika nzvimbo uko iwe unogona kuongorora yakadzama Campaign analytics.
FullSEO yakagadzirirwa chero munhu akagadzirira kutora kutsvaga kwekutsvagisa zvakanyanya, kungave kwakakura kuita kwakawanda kana bhizimusi repadiki remuno. Icho chizereji chakakwana chinokubvumira kuti iwe ubatanidzwe kana semaoko-akasununguka sezvaunoda. Kana iwe uri kutsvaga kuwedzera webhusaiti yako webhusaiti, yako yekushandura chiyero kana chingori chikamu chekambani yako, hapana chishandiso chiri nani chiripo.
AutoSEO vs FullSEO: kugadzira iyo foni
Uchine chokwadi chekuti ipaketi ipi yekusarudza?
Imwe sarudzo ndeye kutanga rwendo rwako uine mazuva gumi nematatu, hapana bvunzo yekumhanya ye AutoSEO nemadhora 0.99 chete. Kana iwe uchinzwa sekunge urikuda chimwe chinhu, unogona nyore kuchinja kuna FullSEO!
Imwe sarudzo ndeyokunzwa izvo vatengi vedu vanotaura nezve sarudzo imwe neimwe. Tarisa uone mutengi wedu wechipupuro peji rekuona kuti mamwe masangano anzwa sei nezvepakeji imwe neimwe - zvakanaka, izvo uye zvinhu zvekufunga nezvazvo.
Pakupera kwezuva, zvisinei kuti ndeipi sarupu yaunosarudza, unogona kuvimba kuti yako webhusaiti uye yako sesangano zvakazara zvichave zvirinani pazviri. Chinzvimbo chakagadziridzwa cheGoogle, traffic yakawanda, yepamusoro soro yekushandura uye mutsara wepazasi uri nani pane zvese zvaunogona kusvika.
Hapana nguva yekurasa. Bata timu yedu ine hushamwari nhasi!